Tontolon’ny Fitsaboana : Vonona hitondra ny anjara birikiny ny « Image Appli » -
AccueilSongandinaTontolon’ny Fitsaboana : Vonona hitondra ny anjara birikiny ny « Image Appli »
Tontolon’ny Fitsaboana : Vonona hitondra ny anjara birikiny ny « Image Appli »
Isan’ireo sekoly ambony manofana ny mpianatra malagasy hiditra an-tsehatra amin’ny sehatry ny fitsaboana ny “IMAGE APPLI” na ny “ Institut de Management de Gestion et de Médecine humaine Appliqués ». Ara-dalàna ny fitsanganany satria dia manana ny « arrêté d’agrément d’ouverture » nomen’ny « ministère de l’enseignement technique et de la formation professionnelle » laharana 06345/2001 METFP nomena tamin’ny 9 jolay 2001, sady nilazan’izany minisitera izany ny fahafahana manofana mpitsabo. Nisy ny resadresaka natao tamin’ny tompon’andraikitr’ity sekoly ity.
Gazety Triatra (+) : Inona no mampiavaka ny sekoly ambony “Image Appli” ?
Image Appli (-) : “Sekoly ambony ara-dalàna izy, ary manolotra fiofanana ara-dalàna ho an’ny zaza malagasy sy ny vahiny tonga miofana ao. Mahasahy mijoro fa tena ara-dalàna tokoa ary vonona hitondra ny anjara birikiny amin’ny tontolon’ny fitsaboana eto Madagasikara. Nisokatra ny fanofanana mpitsabo teto aminay tamin’ny taona 2003, ary mandray mpianatra hiofana ho mpitsabony sekoly. Nanao « stage” tany amin’ireo toeram-pitsaboana ny vahoaka malagasy na “formations sanitaires publiques” eran’i Madagasikara ny mpianatr’IMAGE APPLI satria nomen’ny minisiteran’ny Fahasalamana alalana ho amin’izany. Ny taona 2004,ny 26 jolay 2004 dia nisy ny lalàna 2004-004 momba ny rafi-pampianarana eto Madagasikara izay nampian’ny lalàna 2008-011 tamin’ny 17jolay 2008 nilaza hoe azo atao sy ara-dalàna ny manangana sekoly ambony « privé”, saingy nila maka “autorisation” avy amin’ny minisitera miandraikitra ny fampianarana ambony raha ho an’ny” IMAGE APPLI”. Nanomboka 2005 izahay no nangataka io alàlana avy amin’ny minisiteran’ny Fampianarana ambony io na dia efa nahazo alàlana avy tamin’ny minisiteran’ny Fampianarana teknika sy fanofanana arak’asa aza. Dia nisy ny décret 2008-179 tamin’ny 15 febroary 2008 momba ny fametrahana ny système LMD, izay novain’ny décret 2012-831 tamin’ny 18 septambra 2012. Tonga anefa ny taona 2010, efa vita ny fianarana ho mpitsabo ho an’ireo niditra nianatra tamin’ny taona 2003, ka na dia isan-taona aza no nangatahan’IMAGE APPLI tamin’ny minisiteran’ny Fampianarana ambony nanomboka tamin’ny 2005 io autorisation voadidin’ny lalàna io, dia mbola tsy nomen’ny minisiteran’ny Fampianarana ambony tamin’io taona 2010 io. Voatery nanajanona ny fandraisana mpianatra ny sekoly ary nanakatona ny sekoly. Ny mpianatra efa nahavita fianarana mpitsabo tamin’izany dia voatery niandry ny taona 2014 ny 30 janoary 2014 vao nahazo ny “arrêté d’habilitation exceptionnelle N°8021/2014 MESUPRES” ny andiany voalohany, ary nahazo “habilitation exceptionnelle N°28717/2014 MESUPRES” ny andiany faharoa nahafahan’izy ireo nanao ny “soutenance de these” hahazoany ny “diplôme de docteur d’Etat en Médecine”. Dia namoaka ihany koa ny minisiteran’ny Fampianarana ambony io ny 19 septambra 2014 ny « arrêté N°28718/2014 MESUPRES », « arrêté d’autorisation d’ouverture sy arrêté d’habilitation des offres de formation de IMAGE APPLI ».
(+) Iza no minisitera na rafitra mpanome alalana amin’itony fiofanana itony?
(-) : “Ny minisiteran’ny Fampianarana ambony sy ny fikarohana siantifika no hany minisitera manome alàlana ara-dalàna ny sekoly ambony hisokatra, fa indrindra koa io minisitera io no manome ny habilitation des offres de formations, ary hamafisin’ny arrêté laharana 04-151/2010 navoakan’ny minisiteran’ny Fampianarana ambony milaza hoe : ny arrêté d’habilitation dia omena mba hahafahan’ny IMAGE APPLI manome fanofanana izay manana Bacc ho lasa mpitsabo ara-dalàna. Io arrêté io dia faneken’ny fitondram-panjakana iray manontolo ny diplaoma-na dokotera avoakan’ny IMAGE APPLI. 30 izao no isan’ny dokotera nahazo io diplaoma-na dokotera ara-dalàna efa navoakan’ny sekoly ambony IMAGE APPLI tamin’ny alalan’ny arrêté 28718/2014 MESUPRES io. Ny 7 amin’ireo dokotera efa nivoaka ireo dia miasa amin’ny fanjakana amin’ny maha-dokotera azy eto Madagasikara. Ny 1 amin’ireo dia miasa amin’ny maha-dokotera azy any amin’ny fanjakana any Gabon. Ny 1 amin’ireo dokotera ireo manao spécialisation en médecine any Canada. Ny 1 amin’ireo dokotera ireo dia efa nahavita spécialisation tany Frantsa sy tany Belgique. Ny 20 kosa dia mitsinjara ho toa izao ny asany: ny 10 miasa any amina-projet communautaire financer-n’ny mpamatsy vola avy any ivelany, satria mila dokotera mahay fitantanana mahomby ry zareo, ary nianaran’izy ireo niaraka tamin’ny médecine tato amin’ny IMAGE APPLI izany. Ny 10 ambiny kosa dia miasa any amin’ny Clinique privé, na nanangana ny cabinet medical azy manokana eto Madagasikara”.
(+) : Inona no olana sedrainareo amin’izao fotoana ?
(-) : “ Ny isan’ny mpianatry ny IMAGE APPLI ankehitriny dia 200. Saingy dia mpianatra 200 izany no sakanan’ny minisiteran’ny Fahasalamana tsy afaka hisitraka ny zony amin’ny fanaovana stage any amin’ny hopitalim-panjakana amin’izao fotoana izao na dia efa feno aza ny fepetra ara-dalàna rehetra hahazoan’izy ireo manao izany. Tsy fananan’olom-bitsy ny hopitalim-panjakana fa hopitalim-bahoaka ary anisan’ny vahoaka ireo mpianatra 200 ireo. Mitovy zo ny mpianatr’IMAGE APPLI sy ny mpianatry ny Faculté de Médecine, satria samy “arrêté d’habilitation “ara-dalàna avy amin’ny minisiteran’ny Fampianarana ambony no ahafahan’ireo sekoly ambony roa ireo manofana ho dokotera. Saingy asian’ireo olom-bitsy ao amin’ny minisiteran’ny Fahasalamana sy ireo mpampianatra vitsy an’isa ireo tombo sy hala ny IMAGE APPLI sy faculté de medicine ankehitriny.
Izahay dia sekoly ambony privé vonona hatrany ny hiara-hiasa amin’ny fitondram-panjakana iray manontolo amin’ny fanatsarana ny resaka fitsaboana eto Madagasikara satria efa tsy ampy ny isan’ny mpitsabo eto, ary mahay mitantana ny sehatr’asa rehetra ametrahana azy na nofidiany atao. Izahay dia efa niara-niasa tamin’ny mpampianatra-mpikaroka sy mpikaroka-mpampianatra be dia be, ary mbola vonona ny hanohy izany ho fampandrosoana ny fahasalamana. Fanofanana mpandimby na relève hatrany no ezahin’IMAGE APPLI atao satria mila izany ny taranaka malagasy sy izay mandranto fianarana rehetra ao. Fandraisan’anjaranay amin’ny fampandrosoana an’i Madagasikara izany. Na dia ny fitondram-panjakana aza no mitondra ny be indrindra amin’ny fampandrosoana dia manana ny anjarany na dia kely sy bitika, ary iadianay mafy ny naha-ara-dalàna ny fiofanana omena dia hotohizanay hatrany izay fanarahan-dalàna izay ».